Sagaal nin iyo 13 huba oo la qabtay - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Sagaal nin iyo 13 huba oo la qabtay
La daabacay onsdag 30 maj 2012 kl 12.33
Sagaal qof ayaa bileysku gacanta ku dhigeen iyo 13 huba, kadib markii ay si wada jir ah u shaqeeyeen bileyska iyo ciidamada xuduuduhu isbuucii hore. Qaar kamida dadyoowgan la qabtay ayaa ka tirsan kooxa shuftooyinka ah , lix kamida gacanta bileyska ayey ku jiraan.
Bileyska ayaa qabtay hubkan kadib markii ay sameeyeen kaantarool dhanka gaadiidka ah, barta kaantoroolkan lagu sameeyay ayaa ahayd koonfurta dalkan Sweden, dariiqa loo yaqaan E6 ee isku xidha degmada Halland iyo bariga Götland.
Bilayska ayaa guryaha ama adareesyada ay degenyiin qolooyinkan la qabtay ka helay hub boosta loogu soo diray, Niclas Hallgren, waa madaxa bileyska u qaabilsana fulinta qabashada nimanka iyo hubka laga helay guryahoodaba.
- Waa naxdin, waayo khatar weyn ayey galinaysaa bulshada in hubka sidan loo haysto, balse waa farxad in aan ku guulaysanay sugida hubkaas, ayuu sheegay Niclas Hallgren.
Qorshahan ayaa ah mid ay dawladu ka dambaysay amarna ku siisay sannadkii hore bishiisi Jun in bileyska iyo ciidamada xuduuduhu kawada shaqeeyaan sidii loo joojin lahaa hubka dalka gudihiisa laysu diro iyadoo la isticmaalayo boosaha is gaadhsiinta, sidoo kale la ogaado meelaha hubku ka soo galo dalkan Sweden.
Hubkan ay bileysku gacanta ku dhigeen ayaa ah 13 bistool oo ay ku jiraan hubka automaatika u dhaca, qorshahan ayaa ah mid bileyska iyo ciidamada xuduuduhu ay ku guulaysteen.
- Mid kasta oo kamida hubkan aan qabanay ayaa khatartiisa ku dhex leh bulshada, waa sawirka bileyska iyo ciidamada xuduudku wada jir u haystaan, ayuu sheegay madaxa hawlgalkan gaarka ah ee ay dawladu u qorshaysay sidii hubka suuqa madoow looga saari lahaa.
Sagaalkan qof ee bileysku qabteen ayaa lix kamida ay ku jiraan gacanta bilayska loona haystaa sharci jabinta hubka iyo soo galin hub dalka. Bileyska ayaa sheegay in in dadyoowgani ay ka mid yihiin qaar ku jira shuftooyiin isla markaasna ay bileysku aqoon u leeyihiin dadyoowga ay yihiin.
- Sida caadiga ah dambiyada hubka badana dadka ku jira waa dad ku jira dambiilayaasha abaabulsan, arinkan ayaana cadaynayaa taas ayuu sheegay, Niclas Hallgren.